Ogaden News Agency (ONA) – Qoomiyadda Axmaarada iyo Mucaaradka Zanawi oo Jaaliyadda Ogadenia ee San Diego kumarti Qaaday Los Angeles
Qoomiyadda Axmaarada iyo Mucaaradka Zanawi oo Jaaliyadda Ogadenia ee San Diego kumarti Qaaday Los Angeles
Waxaa maalintii Axadda ee taariikhdu ahayd September 4, 2011 magaalada San Diego ka kicitimay wafdi uu hogaaminayo xidhiidhiyaha Jaaliyaadka reer Ogadenia ee galbeedka Maraykanka (WEST COAST) Mudane Ahmed Ali Yusuf. Waxaa mudanaha weheliyey xubo sare oo ka tirsan jaaliyada ay ka mid yahiin Mudane Abdirahman Mohamud Sheikh Abdi (Hollywood), Mudane Abdicasiis Abdi Ali Abshir iyo Mudane AhmedYassin Ugas Aadan Xadiis.
Waxaa wafdigan marti qaaday Jaaliyadda Axmarada ee magaalada Los Angeles oo munaasabadan ku marti qaaday dhamaan qoomiyaadka ku dhaqan xayndaabka Ethiopia iyo kuwa mucaaradka. Waxay jaaliyadda Amxaarada ay si gooni ah ugu marti qaaday Jaaliyadda Ogadenia ee San Diego. Waxaa kaloo ka soo qayb galay munaasabaddan ha’adaha samafalka, kuwa xuquuqul insaanka iyo kuwa aan dawliga ahayn.
Xubnihii wafdiga ayaa si heersare ah loogu soo dhaweeyey madasha munaasabada halkaana kula kulmay dhamaan xubnihii soo agaasimay. Waxay wafdigaasi kadib la kulmeen ha’adihii kala duwaan ee goobtaas isugu yimid lana qaybsadeen akhbaaro kala duwan oo dhinac walba taabanaya. Waxay halkaa ku qaybiyeen waraaqo farabadan oo qaar ay ka turjumayeen cunaqabataynta lagu hayo shacabka Ogadenia iyada oo xiligani abaar ba’ani jirto. Qaar waxay ahaayeen xad gudubka xuquuqul insaan iyo gumaadka ka socda Ogadenia. Qaar kalena waxay ahaayeen kuwa ku baraarujinaya shacabka Maraykanka iney dawladooda kula xisaabtamaan canshuurtooda lagu gumaadayo shacabka Ogadenia. Waxaa kaloo TVga si taxana ah oga socday sawiro maqal iyo muuqaal ah ee jidh dilka loo geystay shacabka Ogadenia.
Dhamaan qoomiyaadkii ka soo qaybgalay munaasabadan ayaa waxay wateen ama soo bandhigeen boodhadh ay ku qornaayeen akhbaaro dhan walba ah iyo sawiro ka turjumaya xaaladda ay maanta Ethiopia kusugan tahay. Waxaa qosol lahayd kolkii gudiga qaban qaabadu sheegeen in bakhtiyaa naxiib goobaha akhbaaraha ay isku xijisay safaarada Ethipia (TPLF) iyo Jaaliyadda Axmaarada iyo martidooda. Kadib markey akhbaartaas maqleen dhamaan dad weynihii goobtaas isugu yimid ayey qosol iyo sawaxan isku dareen waxayna dhaheen “markuu qofku xaq kusocdo waxwalba ayaa isugu toosa” waayo waxay arrintani usuurta galisay in marka dad weynaha munaasabadan kasoo qayb galay ay soo maraan safaarada Ethiopia ay kadib ku xigsan Jaaliyaadka halkaana beentoodii la gaga daba tagay.
Ujeedada kulankan qawmiyadaha ayaa waxuu ahaa sidii ay qoomiyaadka kala duwan ee ku dhaqan xayndaabka Ethiopia isaga kaashan lahaayeen dawladda Kaligii Taliye Zanawi, aduunkana ugu soo bandhigi lahaayeen tacadiga iyo xad gudubka xuquuqul insaan siiba xasuuqa uu kuhayo shacabka Ogadenia.
Waxaa in cabaar kadib ay waftigii la kulmeen wariye Maraykan ah oo u sheegay in uu daggan yahay magaalada Addis Ababa isla markaan usheegay in saxaafadda Ethiopia ay maanta xaaladda ugu xun kujirto ciddii hadashana jeelka loo taxaabo. Wuxuu intaa ku daray in uu lasocdo xaalada Ogadenia uuna aad uga xun yahay. Gabagabadii ayuu la qaybsaday akhbaar aad xaasaasi u ah oo aan halkan lagu soo bandhigi Karin.
Waxay wafdigaasi nasiib uyeesheen iney goobtaas kula kulmaan U.S Congresswoman Karen Bass kulana qaybsadeen akhbaar farabadan oo isugu jira dukumentiyo iyo sawiro. Waxay usheegeen in aabarta geeska Africa maanta ka taagan ay ka bilaabatay Ogadenia nasiib xumana dawladda Zanawi aysan u ogalayn ha’adihii samafalka iyo saxaafadda aduunka. Waxay u sheegtay in arrintaasi tahay “unacceptable” waxaan la ogolaan Karin ayna usoo bandhigi doonto dawlada Maraykanka. Waxay ka ballan qaaday in xubnaha wafdiga ay iyadda iyo shaqaalaheedu la shaqayn doonaanan.
Socdaalkan ayaa waxaa uu ahaa mid guul usoo hoyatay shacabka Ogadenia, isla markaana ay ogaadaan in shacabkooda dhibaddu aysan fadhiisanayn ilaa xaqooda loo ogolaado.
Jaaliyadda Ogadenia ee San Diego ayaa halkan mahad gaar ah uga soo jeedinaya Jaaliyadda Axmaarada ee magaalada Los Angeles, iyo sida qiimaha iyo qadarinta leh ee ugu marti qaadeen.
Sawirada ka daawo halkan:
ILLAAHOW dalka noo xorey ethiopiana alla hajebiyo ogadeniana kor alla hakyeelo
guul weeye, halganka reer Ogaadeenya oo sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka danbaysa, jaaliyadda WEST COAST guulaysta sii giijiya